Na-aga ije n'oké ọhịa Småland - Gaa na Hultsfred
n'okporo ụzọ dị nro na echiche mara mma
Yiri akpụkpọ ụkwụ gị, buru akpa nri ehihie na uwe mwụda mara mma ma pụọ ​​n’otu n’ime ụzọ ụkwụ anyị mara mma. N'ebe a, ị nwere ike ịga ije n'okporo ụzọ dị nro na echiche mara mma site na oke ohia, obodo na ala ubi.
Björnnässlingan bụ ezigbo ọhịa anwansi nwere pines ochie na-eguzo gburugburu okwute ndị ejiri lichen kpuchie. Ebe nchekwa Björnnäset dị na ya
Na Järnforsen, enwere netwọkụ zuru oke nke ụzọ ụkwụ dị egwu, ha niile bidoro na mpụga obodo. Na mbido enwere
Na Hjortenleden ị na-eje ije n'okporo ụzọ gravel mara mma site na ala ubi na obodo nta, jikọtara ya na obere ụzọ n'ime ọhịa. Ị
Na Järnforsen, enwere okporo ụzọ dị egwu dị egwu, na-amalite ozugbo na mpụga obodo. Na mbido, enwere ebe a na-egbu anụ,
Gburugburu Hammarsjön na-aga gburugburu Stora Hammarsjön ma ọ magburu onwe ya maka njem ụbọchị. Mostly na-agakarị n’ụzọ dị warara
Chọpụta Virserum n'onwe gị
Chọpụta Virserum n'onwe gị. Ọ bụrụ na ị nwere oge fọdụrụ n'oge nleta gị na Virserum, anyị na-akwado ka ịme otu
Ị nwere ike ịmalite njem gị site na ebe nchekwa ọdịdị Länsmansgårdsängen. Ụzọ ahụ na-eduga gị site na obodo ụlọ ọrụ mmepụta ihe ochie Hjortöström ma kpọga gị n'ihu
Zọ a na-amalite na ogige Kalvkätte, nke bụ ezigbo ụlọ ọrụ na ụzọ mbata n'okporo ụzọ awara awara 23 gaa Hultsfred. Tinye ụgbọ ala ahụ
Trazọ a gafere akụkụ elu nke obodo Hultsfred ma jikọta Ostkustleden na Sevedeleden. Lönnebergaleden bụ nke Sweden network nke ụzọ dị larịị na
Ihe akaghị nke na-aga n'akụkụ ọdọ mmiri ahụ. E nwere tebụl kọfị abụọ nwere elu ụlọ n'akụkụ MOK ụlọ, ebe a na-asa ahụ na ime ụlọ na-agbanwe agbanwe na ebe a na-asa ahịhịa site na ochie
Emilleden kacha mma bidoro na Lönneberga hembygdsgård ma ọ bụ Mariannelunds na Hessleby hemgårdsgård, ebe enwere ọtụtụ ebe a na-adọba ụgbọala. Na-ahọrọ ọzọ